बिहीबारका दिन किन देवताका गुरु बृहस्पतिको पूजा गर्ने ? – Khabar Silo
Posted on July 9, 2020 Author khabar silo Comment(0)
काठमाडौं– हरेक बार मानिसहरुले विभिन्न देवी देवताहरुको पूजा अर्चना गर्ने गर्छन् । बार अनुसार नै भगवानको पूजा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ ।
बिहीबार देवताका गुरु बृहस्पति तथा भगवान श्री हरि विष्णुको लागि समर्पित छ । यो दिन व्रत बस्नाले धन, पुत्र तथा विद्या प्राप्ति हुनेछ । पहेलो रंगको कपडा लगाउने र पहेलै वस्तुको दान गरेमा शुभ मिल्नेछ । साथै, यो दिन विष्णुकी पत्नी लक्ष्मीको पनि पूजा गरिन्छ ।
त्यसाे त राशिचक्र अनुसार धनु र मीन राशिका स्वामी पनि बृहस्पतिलाई नै मानिन्छ । ज्ञान र बुद्धिका दाता समेत मानिन्छ । त्यसैले बिहीबारका दिन बृहस्पतिको पूजा गरिन्छ ।
को हुन्, ब्रम्हा, विष्णु र महेशकी जननी ? कसरी भयो त्रिदेवको जन्म ?
भगवानको मुख्य रुप अर्थात ब्रम्हा, बिष्णु र महेशलाई मानिन्छ । यी तीनैलाई देवताहरुमा उत्तम देवताको रुपमा पुजिदै आएको छ । तर पुरा जगतका सञ्चालक यी त्रिदेव कसरी उत्पति भए ? यीनिहरुको जन्म कसरी भयो ? हिन्दु धर्मशास्त्र वेदमा लेखिएको छ, परमेश्वर अजन्मा, अदृश्य र निराकार छन् । शिव पुराणमा समेत ब्रह्मा सत्य र अविकारी छन् […]
अग्नि तत्वसँग सम्बन्धित सिंह, मेष र धनु राशिका व्यक्तिहरु यस कारण हुन्छन् खास !
Posted on July 28, 2021 Author khabar silo
सिंह, मेष र धनु राशि अग्नि तत्वसँग सम्बन्धित छन्। यी राशिसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि अग्नि जस्तै तीखो र आवेगमा आउने स्वभावका हुन्छन्। सिंह, मेष वा धनु राशिका व्यक्तिहरूमा काम पूरा गर्न अरुभन्दा फरकै जोस र उत्साह हुन्छ। तिनीहरू थकित हुँदैनन् र आफ्नो उद्देश्य वा काम पूरा नभएसम्म तिनीहरू हरेस खाँदैनन्। उनीहरूले जुन कुरा गर्ने निर्णय […]
यी ४ राशिका हुन्छन् सबै भन्दा धेरै दुश्मन ! कतै तपाई पो पर्नुभयो की ?
Posted on October 29, 2020 Author khabar silo
एजेन्सी- जन्म समय अनुसार हरेक मानिसहरुलाई ज्योतिषशास्त्रले १२ वटा राशिमा विभाजित गरेको छ। जन्मसमयमा हुने ग्रह र नक्षत्रको स्थिति हेरेर राशि निर्धारण गर्नेगरिन्छ। १२ वटा राशिको फरक-फरक भाग्य हुने मात्र नभई व्यवहार समेत फरक-फरक हुन्छ। मित्र मात्र होइन दुश्मन पनि हरेक व्यक्तिको हुन्छ। फरक यति हो की केहिका धेरै दुश्मन हुन्छन् भने केहिका कम। ज्योतिषशास्त्रलाई […]
आज १० अन्तर्राष्ट्रिय उडान, ९६५ नेपाली स्वदेश फर्किए